ကျွန်တော်နဲ့အန်တီလေးရှမ်းမ – My Blog
ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုလေးယောက်ရှိပါတယ်အမေရယ်အမရယ်အဒေါ်ရယ်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူလယ်သမားတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့အချိန် တစ်နေ့တော့တောင်းကြီးကကျောက်ပွဲစားရှမ်းမတစ်ယောက်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဗျအမေ့မိတ်ဆွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ ကတော့သူ့ကိုအန်တီရှမ်းမလို့ပဲခေါ်တယ်အန်တီဆိုပေမယ့်လဲအသက်က၃၀ဝန်းကျင်လောက်တစ်နေ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာဈာက်နေချိန်မှာ အန်တီရှမ်းမကရေချိုးပြီးအိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်လာပြီးအခန်းထဲမှာအကျႌလဲတာပေါ့ကျွန်တော့အခန်းနဲ့က ကပ်နေတာဗျကျွန်တော်လဲလူပျိုပေါက်အရွယ် ဆိုတော့လဲကာမစိတ်လေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲတာနဲ့ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်အခန်းကလဲထရံကာဆိုတော့ကျွန်တော်လဲချောင်းကြည့် ဖြစ်တယ်ဗျအန်တီရှမ်းမကဗျာသူထမိန်လေးကိုရင်လျှားထားရာကနေအောက်ကိုလျှောဝတ်လိုက်တယ်
ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာလန့်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ်သူနို့ တွေကလုံးပြီးဖွေးနေတာပဲဗျာကျွန်တော်လီးကတောင်နေပြီသူကဆက်ပြီးတော့အောက်ခံဘောင်းဘီလေးဝတ်ပြန်ရောဝတ်ပြီးထမိန်လေးဖြေချလိုက်တာ ဗျာကျွန်တော်လဲကြည့်ပြီးထုချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပိုစိုးတာကသူကဘောင်းဘီဝတ်ပြီတော့ဗျာသူ့အဖုတ်ထဲကိုပေါင်ဒါမုန့်တွေပတ်နေတာဗျကျွန်တော် တော်လဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးထုလိုက်တာတစ်ခါပြီးပြီသွားတယ်ဗျ ကဲဗျတိုတိုနဲ့လိုရင်ပဲပြောတော့မယ် တစ်နေ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားချိန်နောက်ကြသွား တယ် အိမ်ကလူတွေကလဲတောင်သူတွေဆိုတော့မနက်အစောစောအလုပ်သွားကြတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်ကျောင်းသွားဖို့ကားစောင့်နေတာကားမရတော့ ကျွန်တော်လဲအိမ်ပဲပြန်ခဲ့တော့တယ် အဲမှာစတာပဲဗျို့ အိမ်မှာကအန်တီရှမ်းမတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာလေ ကျွန်တော်အိမ်ရှေ့ရောက်တော့အိမ်ကတံခါး တွေအကုန်ပိတ်ထားတယ်ဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်အသံတွေကြားလို့ချောင်းကြည့်တော့ အန်တီရှမ်းမကတီဗွီရှေ့မှာဗျာအောကားတွေကြည့်ပြီးကား ကားကြီးသူ့စောက်ပတ်လေးကိုလက်နဲ့ထိုးနေတာဗျ
ကျွန်တော်လဲလီးကတောင်နေပြီလေအဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့အသံပေးလိုက်တယ် အန်တီရှမ်းမကပျာပျာသလဲတီဗွီနဲ့DVDစက်ကိုပိတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့တ့ခါးတွေဖွင့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်လီးကတောင်တုန်းပဲလေ ကျွန်တော့ကိုသားကျောင်းမသွားဘူးလားတဲ့ ဟုတ်ကားမမှီလို့ လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်ပြီးအဝတ်စားတွေလဲပြီးအပြင်ပြန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်သိတာပေါ့DVDစက်ထဲမှာအခုနကအန်တီရှမ်းမကြည့်လက်စအောကားခွေရှိသေးတယ်ဆိုတာအန်တီရှမ်းမကတုနတုန်ရင်ရင်ဖြစ်နေတယ်သူ့အောကားတွေကြည့်နေတာကျွန်တော်သိသွားပြီလားဆိုပြီး ကျွန်တော်ကတော့ခပ်တည်တည်ပဲနေပြီးသီချင်းနားထောင်အုံးမယ်ဆိုပြီးပြောတော့အန်တီရှမ်းမကသားနားမထောင်နဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသားစာကျက်ရမယ့်အချိန်လေတဲ့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ကမရ ရအောင်ဖွင့်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အသံတွေက. အားး အီးးးဘွတ် ဘွတ် အိုးအိုးဂျပန်မလေးဖင်ကုန်းပေးနေတာအန်တီရှမ်းမကအတင်းပြေးပိတ်တယ်လေအဲတာနဲ့ကျွန်တော်လဲမထူးဇာတ်ခင်းလိုက်တယ်အန်တီရှမ်းမအခုနကအောကားကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာလုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြောလိုက်တော့အန်တီရှမ်းမလန့်သွားတယ် သားဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့မုန့်ဖိုးပေးမယ်တဲ့ပိုက်ဆံ၅၀၀၀ပေးတယ်
ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်ကပိုက်ဆံမလိုချင်ဘူး…လို့ပြောလိုက်တယ်ပိုက်ဆံမလိုချင်ရင်သားကဘာလိုချင်တာလဲတဲ့ ကျွန်တော်လဲရဲရဲတင်းတင်းပြောလိုက်အန်တီရှမ်းမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုကိုင်ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ အဲတာတော့မရဘူးလို့သူကပြောတယ်မရရင်လဲနေပေါ့သူများတွေကိုလျှောက်ပြောလိုက်မယ်လို့ပြောတော့သူက အင်း…ဒါဆိုလဲ….ကိုင်ဆိုပြီးသူ့ထမိန်ကိုလှန်ပေးတော့ ကျွန်တော့်လီးကတောင်လာတယ်လေ အန်တီရှမ်းမရဲ့စောက်ပတ်ကအခုနကအောကားကြည့်ထားတော့အရည်တွေထွက်နေတယ်လေ အန်တီအဲတာဘာအရည်တွေလဲလို့မေးတော့သူကစောက်ရည်လို့ပြောတယ် ဘာလိူ့ထွက်တာလဲလို့မေးတော့ခံချင်လို့ပေါ့တော့ သူကသားလိုးဘူးလားလို့မေတယ်ဟက့်အင်လို့ပြောလိုက်တော့ သားကိုအန်တီသင်ပေးမယ်တဲ့သားပုဆိုးချွတ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လဲပုဆိုးချွတ်ပေးလိုက်တော့အန်တီရှမ်းမက ဟယ်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ
အန်တီရှမ်းမကကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးအန်တီစုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစုပ်တော့တာပဲ ကျွန်တော်လဲတစ်ခါမှမခံဘူးတော့ အားးးး အားးးး အားးး ကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ် ဘယ်လိုကြီးမှန်မသိဘူး အား အား အားအန်တီကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အား အားအားအား အင်းအင်းတော်ပြီအန်တီ တော်ပြီ အဲတာန်ဲအန်တီရှမ်းမကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် သားနို့စို့ပေးပါလားတဲ့ကျွန်တော်အန်တီရှမ်းမနို့လေးတွေကိုစို့ပေးနေတယ် အန်တီရှမ်မက အား အားသားရယ်ကောင်းလိုက်တာ အင်း အင်းအင်းကောင်းတယ်နာနာလေးစို့တဲ့သား အန်တီသားလိုးချင်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ အန်တီရှမ်းမကသားလိုးချင်ရင်လိုးတော့လေဆိုပြီးပတ်လက်လှန်ပြီးပေါင်ကားပေးတယ် အန်တီရှမ်းကကျွန်တော့်လီးကြီးကိုကိုင်ပြီးသူ့စောက်ပတ်ဝကိုတေ့ပေးတော့ကျွန်တော်လဲဆောင့်ချလိုက်အန်တီရှမ်းကအော်လိုက်တာ အားးးးနာလိုက်အဲလောက်တောင်ဆောင့်ရလားတဲ့က်ှန်တော်ကအရိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တဲ့အဲတာနဲ့ကျွန်တော်လဲတစ်ချက်ခြင်းမှန်မှန်လေးလိုးနေတော့အန်တီရှမ်းမကကောင်းလိုက်တာသားရယ်အားး အား
အားးး အားး သားကောင်းတယ် ကောင်းတးလိုက်သားရယ် ဆောင့်ပါတော့ အားးး နာနာလေးဆောင့်ပေးပါ အန်တီစောက်ပတ်ကွဲသွားပါစေ. ဆောင့်ပေး အ င်းး အင်းး အားး အားး လိုးပါ မြန်မြန်လိုးပေးပါသားရယ်သားလီးကြိးကကောင်းလိုက် ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ်ဘွတ် အုအု အု အား အားသားလိုးတာကောင်းလား အန်တီရှမ်းမ ကောင်းတယ် လိုးပါမြန်အြန်လေးလိုးပေးပါ အန်တီကကျွန်တော်လိုးတာအားမရလို့ ထင်တယ်သား အောက်ကနေဆိုပြီး အပေါ်ကနေတက် ဆောင့်တော့တာပဲ အားအား အား အန်တီ အားး ကောင်းလားသားအန်တီလိုးပေးတာ ကောင်းတယ်အန်တီ အား အား အား အား အု အု အု အု အု ဘွတ် ဘွတ် ပတ် ပတ် အန်တီ ရှမ်းမ ကုန်းပေးပါလားလို့ပြောတော့ သားစိတ်တိုင်းကျ ပဲဆိုပြီး ကုန်ပေးတယ် ကျွန်တော်လဲနောက်ကနေအားကုန်စောင့်ပေးလိုက် တာ ကောင်းလိုက်တာသားရယ် သားကအရမ်းလိုးနိုင်တာပဲလူနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့ ဆောင့်သားအန်တီပြီးတော့မယ် ဆောင့် ဆောင့် သား နာနာလေးဆောင့် ပေး အား အား အား အား အ. အ အ အ အင်း အင်းကောင်းတယ်သား အားအား အင်း ကောင်းလိုက်တာသားရယ် အန်တီပြီးတော့မယ် အား အား
အင်း အင်းပြီးပြီ ပြီးပြီသား ကျွန်တော်လဲအန်တီရှမ်းမကိုအချက်နှစ်ဆယ်လောက်စောင့်ပြီး အားအား အားးးးးးအန်တီပြီးပြီသွားပြီသား ကျွန်တော်လဲပြီး ပြီ ဆိုပြီအန်တီရှမ်းမစောက်ပတ်ထဲကိုလက်ရည်တွေ ပန်ထည့်လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီးမှိန်းနေ တော့အန်တီရှမ်းမက တိုးတိုးလေး ပြောတယ်သား က အရမ်းလိုးတက်တာပဲတဲ့ သားကိုချစ်မိသွားပြီတဲ့ နောက်နေ့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားပြီးပြန်လာတော့အန်တီရှမ်းမ ပြန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်လဲအန်တီရှမ်း မပြန်လာတာကိုစောင့်နေတာအခုထိပါပဲ…… …… ပြီးပါပြီ…..
ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာမိသားစုေလးေယာက္ရွိပါတယ္အေမရယ္အမရယ္အေဒၚရယ္ေပါ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာင္သူလယ္သမားေတြေပါ့ဗ်ာကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆယ္တန္းတက္ေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္ေန႔ေတာ့ေတာင္းႀကီးကေက်ာက္ပြဲစားရွမ္းမတစ္ေယာက္အိမ္ကိုေရာက္လာတယ္ဗ်အေမ့မိတ္ေဆြေပါ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့သူ႔ကိုအန္တီရွမ္းမလို႔ပဲေခၚတယ္အန္တီဆိုေပမယ့္လဲအသက္က၃၀ဝန္းက်င္ေလာက္တစ္ေန႔ေတာ့ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာဈာက္ေနခ်ိန္မွာ အန္တီရွမ္းမကေရခ်ိဳးၿပီးအိမ္ေပၚထပ္ကိုတက္လာၿပီးအခန္းထဲမွာအက်ႌလဲတာေပါ့ကြၽန္ေတာ့အခန္းနဲ႔က ကပ္ေနတာဗ်ကြၽန္ေတာ္လဲလူပ်ိဳေပါက္အ႐ြယ္ ဆိုေတာ့လဲကာမစိတ္ေလးေတြရွိတာေပါ့ဗ်ာအဲတာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ေခ်ာင္းၾကည့္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတယ္အခန္းကလဲထရံကာဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္လဲေခ်ာင္းၾကည့္ ျဖစ္တယ္ဗ်အန္တီရွမ္းမကဗ်ာသူထမိန္ေလးကိုရင္လွ်ားထားရာကေနေအာက္ကိုေလွ်ာဝတ္လိုက္တယ္
ကြၽန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာလန႔္သလိုလိုျဖစ္သြားတယ္သူႏို႔ ေတြကလုံးၿပီးေဖြးေနတာပဲဗ်ာကြၽန္ေတာ္လီးကေတာင္ေနၿပီသူကဆက္ၿပီးေတာ့ေအာက္ခံေဘာင္းဘီေလးဝတ္ျပန္ေရာဝတ္ၿပီးထမိန္ေလးေျဖခ်လိုက္တာ ဗ်ာကြၽန္ေတာ္လဲၾကည့္ၿပီးထုခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာတယ္ပိုစိုးတာကသူကေဘာင္းဘီဝတ္ၿပီေတာ့ဗ်ာသူ႔အဖုတ္ထဲကိုေပါင္ဒါမုန႔္ေတြပတ္ေနတာဗ်ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္လဲသူ႔ကိုၾကည့္ၿပီးထုလိုက္တာတစ္ခါၿပီးၿပီသြားတယ္ဗ် ကဲဗ်တိုတိုနဲ႔လိုရင္ပဲေျပာေတာ့မယ္ တစ္ေန႔ေတာ့ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းသြားခ်ိန္ေနာက္ၾကသြား တယ္ အိမ္ကလူေတြကလဲေတာင္သူေတြဆိုေတာ့မနက္အေစာေစာအလုပ္သြားၾကတယ္ေပါ့ ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းသြားဖို႔ကားေစာင့္ေနတာကားမရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လဲအိမ္ပဲျပန္ခဲ့ေတာ့တယ္ အဲမွာစတာပဲဗ်ိဳ႕ အိမ္မွာကအန္တီရွမ္းမတစ္ေယာက္ထဲက်န္ခဲ့တာေလ ကြၽန္ေတာ္အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့အိမ္ကတံခါး ေတြအကုန္ပိတ္ထားတယ္ဘာလို႔ပါလိမ့္ေပါ့ကြၽန္ေတာ္အသံေတြၾကားလို႔ေခ်ာင္းၾကည့္ေတာ့ အန္တီရွမ္းမကတီဗြီေရွ႕မွာဗ်ာေအာကားေတြၾကည့္ၿပီးကား ကားႀကီးသူ႔ေစာက္ပတ္ေလးကိုလက္နဲ႔ထိုးေနတာဗ်
ကြၽန္ေတာ္လဲလီးကေတာင္ေနၿပီေလအဲဒီျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ကြၽန္ေတာ္လဲဘာလုပ္ရမွန္းမသိတာနဲ႔အသံေပးလိုက္တယ္ အန္တီရွမ္းမကပ်ာပ်ာသလဲတီဗြီနဲ႔DVDစက္ကိုပိတ္လိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့တ့ခါးေတြဖြင့္လိုက္တယ္ ကြၽန္ေတာ္လီးကေတာင္တုန္းပဲေလ ကြၽန္ေတာ့ကိုသားေက်ာင္းမသြားဘူးလားတဲ့ ဟုတ္ကားမမွီလို႔ လို႔ကြၽန္ေတာ္ေျပာၿပီးအခန္းထဲဝင္ၿပီးအဝတ္စားေတြလဲၿပီးအျပင္ျပန္ထြက္လာတယ္ကြၽန္ေတာ္သိတာေပါ့DVDစက္ထဲမွာအခုနကအန္တီရွမ္းမၾကည့္လက္စေအာကားေခြရွိေသးတယ္ဆိုတာအန္တီရွမ္းမကတုနတုန္ရင္ရင္ျဖစ္ေနတယ္သူ႔ေအာကားေတြၾကည့္ေနတာကြၽန္ေတာ္သိသြားၿပီလားဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ခပ္တည္တည္ပဲေနၿပီးသီခ်င္းနားေထာင္အုံးမယ္ဆိုၿပီးေျပာေတာ့အန္တီရွမ္းမကသားနားမေထာင္နဲ႔တဲ့ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ဘာမွမျဖစ္ဘူးသားစာက်က္ရမယ့္အခ်ိန္ေလတဲ့ဘယ္ရမလဲကြၽန္ေတာ္ကမရ ရေအာင္ဖြင့္လိုက္ေတာ့ထြက္လာတဲ့အသံေတြက. အားး အီးးးဘြတ္ ဘြတ္ အိုးအိုးဂ်ပန္မေလးဖင္ကုန္းေပးေနတာအန္တီရွမ္းမကအတင္းေျပးပိတ္တယ္ေလအဲတာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္လဲမထူးဇာတ္ခင္းလိုက္တယ္အန္တီရွမ္းမအခုနကေအာကားၾကည့္ၿပီးကိုယ့္ဘာသာလုပ္ေနတာကြၽန္ေတာ္ေတြ႕တယ္ေျပာလိုက္ေတာ့အန္တီရွမ္းမလန႔္သြားတယ္ သားဘယ္သူ႔မွျပန္မေျပာပါနဲ႔တဲ့မုန႔္ဖိုးေပးမယ္တဲ့ပိုက္ဆံ၅၀၀၀ေပးတယ္
ကြၽန္ေတာ့္ကိုကြၽန္ေတာ္ကပိုက္ဆံမလိုခ်င္ဘူး…လို႔ေျပာလိုက္တယ္ပိုက္ဆံမလိုခ်င္ရင္သားကဘာလိုခ်င္တာလဲတဲ့ ကြၽန္ေတာ္လဲရဲရဲတင္းတင္းေျပာလိုက္အန္တီရွမ္းမရဲ႕ေစာက္ဖုတ္ကိုကိုင္ၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ အဲတာေတာ့မရဘူးလို႔သူကေျပာတယ္မရရင္လဲေနေပါ့သူမ်ားေတြကိုေလွ်ာက္ေျပာလိုက္မယ္လို႔ေျပာေတာ့သူက အင္း…ဒါဆိုလဲ….ကိုင္ဆိုၿပီးသူ႔ထမိန္ကိုလွန္ေပးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္လီးကေတာင္လာတယ္ေလ အန္တီရွမ္းမရဲ႕ေစာက္ပတ္ကအခုနကေအာကားၾကည့္ထားေတာ့အရည္ေတြထြက္ေနတယ္ေလ အန္တီအဲတာဘာအရည္ေတြလဲလို႔ေမးေတာ့သူကေစာက္ရည္လို႔ေျပာတယ္ ဘာလိူ႔ထြက္တာလဲလို႔ေမးေတာ့ခံခ်င္လို႔ေပါ့ေတာ့ သူကသားလိုးဘူးလားလို႔ေမတယ္ဟက့္အင္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သားကိုအန္တီသင္ေပးမယ္တဲ့သားပုဆိုးခြၽတ္လိုက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္လဲပုဆိုးခြၽတ္ေပးလိုက္ေတာ့အန္တီရွမ္းမက ဟယ္နဲတာႀကီးမဟုတ္ဘူးတဲ့ဗ်ာ
အန္တီရွမ္းမကကြၽန္ေတာ့္လီးကိုကိုင္ၿပီးအန္တီစုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီးစုပ္ေတာ့တာပဲ ကြၽန္ေတာ္လဲတစ္ခါမွမခံဘူးေတာ့ အားးးး အားးးး အားးး ေကာင္းလိုက္တာအန္တီရယ္ ဘယ္လိုႀကီးမွန္မသိဘူး အား အား အားအန္တီကြၽန္ေတာ္ၿပီးေတာ့မယ္အား အားအားအား အင္းအင္းေတာ္ၿပီအန္တီ ေတာ္ၿပီ အဲတာန္ဲအန္တီရွမ္းမကကြၽန္ေတာ္ကိုေျပာတယ္ သားႏို႔စို႔ေပးပါလားတဲ့ကြၽန္ေတာ္အန္တီရွမ္းမႏို႔ေလးေတြကိုစို႔ေပးေနတယ္ အန္တီရွမ္မက အား အားသားရယ္ေကာင္းလိုက္တာ အင္း အင္းအင္းေကာင္းတယ္နာနာေလးစို႔တဲ့သား အန္တီသားလိုးခ်င္ၿပီလို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ အန္တီရွမ္းမကသားလိုးခ်င္ရင္လိုးေတာ့ေလဆိုၿပီးပတ္လက္လွန္ၿပီးေပါင္ကားေပးတယ္ အန္တီရွမ္းကကြၽန္ေတာ့္လီးႀကီးကိုကိုင္ၿပီးသူ႔ေစာက္ပတ္ဝကိုေတ့ေပးေတာ့ကြၽန္ေတာ္လဲေဆာင့္ခ်လိုက္အန္တီရွမ္းကေအာ္လိုက္တာ အားးးးနာလိုက္အဲေလာက္ေတာင္ေဆာင့္ရလားတဲ့က္ွန္ေတာ္ကအ႐ိုင္းျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္တဲ့အဲတာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္လဲတစ္ခ်က္ျခင္းမွန္မွန္ေလးလိုးေနေတာ့အန္တီရွမ္းမကေကာင္းလိုက္တာသားရယ္အားး အား
အားးး အားး သားေကာင္းတယ္ ေကာင္းတးလိုက္သားရယ္ ေဆာင့္ပါေတာ့ အားးး နာနာေလးေဆာင့္ေပးပါ အန္တီေစာက္ပတ္ကြဲသြားပါေစ. ေဆာင့္ေပး အ င္းး အင္းး အားး အားး လိုးပါ ျမန္ျမန္လိုးေပးပါသားရယ္သားလီးႀကိးကေကာင္းလိုက္ ဖြတ္ ဖြတ္ ဘြတ္ဘြတ္ အုအု အု အား အားသားလိုးတာေကာင္းလား အန္တီရွမ္းမ ေကာင္းတယ္ လိုးပါျမန္ျအန္ေလးလိုးေပးပါ အန္တီကကြၽန္ေတာ္လိုးတာအားမရလို႔ ထင္တယ္သား ေအာက္ကေနဆိုၿပီး အေပၚကေနတက္ ေဆာင့္ေတာ့တာပဲ အားအား အား အန္တီ အားး ေကာင္းလားသားအန္တီလိုးေပးတာ ေကာင္းတယ္အန္တီ အား အား အား အား အု အု အု အု အု ဘြတ္ ဘြတ္ ပတ္ ပတ္ အန္တီ ရွမ္းမ ကုန္းေပးပါလားလို႔ေျပာေတာ့ သားစိတ္တိုင္းက် ပဲဆိုၿပီး ကုန္ေပးတယ္ ကြၽန္ေတာ္လဲေနာက္ကေနအားကုန္ေစာင့္ေပးလိုက္ တာ ေကာင္းလိုက္တာသားရယ္ သားကအရမ္းလိုးႏိုင္တာပဲလူနဲ႔မလိုက္ဘူးတဲ့ ေဆာင့္သားအန္တီၿပီးေတာ့မယ္ ေဆာင့္ ေဆာင့္ သား နာနာေလးေဆာင့္ ေပး အား အား အား အား အ. အ အ အ အင္း အင္းေကာင္းတယ္သား အားအား အင္း ေကာင္းလိုက္တာသားရယ္ အန္တီၿပီးေတာ့မယ္ အား အား
အင္း အင္းၿပီးၿပီ ၿပီးၿပီသား ကြၽန္ေတာ္လဲအန္တီရွမ္းမကိုအခ်က္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေစာင့္ၿပီး အားအား အားးးးးးအန္တီၿပီးၿပီသြားၿပီသား ကြၽန္ေတာ္လဲၿပီး ၿပီ ဆိုၿပီအန္တီရွမ္းမေစာက္ပတ္ထဲကိုလက္ရည္ေတြ ပန္ထည့္လိုက္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္သားဖက္ၿပီးမွိန္းေန ေတာ့အန္တီရွမ္းမက တိုးတိုးေလး ေျပာတယ္သား က အရမ္းလိုးတက္တာပဲတဲ့ သားကိုခ်စ္မိသြားၿပီတဲ့ ေနာက္ေန႔ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းသြားၿပီးျပန္လာေတာ့အန္တီရွမ္းမ ျပန္သြားၿပီတဲ့ကြၽန္ေတာ္လဲအန္တီရွမ္း မျပန္လာတာကိုေစာင့္ေနတာအခုထိပါပဲ…… …… ၿပီးပါၿပီ…..
Categorized as အင်းဆက် Tagged ကျွန်တော်နဲ့အန်တီလေးရှမ်းမ